काठमाडौँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०४, २०७५१२:५१
किन हुँदैछ विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती ?
उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका ओली कहिले फर्कंदै छन् स्वदेश ? कस्तो छ उनको स्वास्थ्य ?
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे छलफल गर्न कांग्रेसले बाेलायाे बैठक
ओली र प्रचण्डको कारण बस्न सकेन नेकपा सचिवालयको बैठक !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट : आखिर किन कसले हाल्यो रिट ?
कर्मचारी खटाएको स्थानमै जानुपर्छः मन्त्री पण्डित